Okwu & Ọnọdụ nke Wondershare Software
Wondershare Software Co., Ltd. na enyemaka Wondershare Software (HK) Co., Ltd. na-eme ka ihe ọmụma na ngwaahịa dị ka ị na a website, n'okpuru ndị na-esonụ usoro na ọnọdụ. Site na ịnweta a website ị na-ekweta okwu ndị a na ọnọdụ. Wondershare Mee ikike achọ niile ịgba akwụkwọ na iwu na ke hara nhatanha maka ihe ọ bụla mebiri nke usoro ndị a na ọnọdụ.
Ọ bụla ikike enyeghị ọhere ozugbo ebe a ka edebere.
E nwere pụta ụwa ize ndụ na ojiji nke ọ bụla Software dị maka nbudata na Internet, na Wondershare Software ugbu-adụ gị ọdụ ka n'aka na ị kpamkpam ghọta ihe niile ihe ize ndụ ndị Tupu nbudata ọ bụla nke Software (gụnyere-enweghị mmachi, nwere ọrịa gị usoro site na kọmputa nje virus na ọnwụ nke data). Ị bụ nanị maka ezigbo nchebe na nkwado ndabere na mpaghara nke data na akụrụngwa na-eji na njikọ na ihe ọ bụla nke Software.
OYIYI: All logos, ikwommiri meziri, peeji nkụnye ndị eji isi mee, oyiyi na-emeputa egosipụta na saịtị a bụ ndị ọrụ akara, edenyere, na / ma ọ bụ ahia uwe (ịgụnye, "Marks") nke Wondershare ma ọ bụ ya ọzọ ikikere .. Ewezuga expressly kwere n'ime ebe a , na-eji, Iṅomi, mgbasaozi, na-egosipụta, modifying ma ọ bụ na-ekesa ihe ọ bụla Marks n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ site ọlị enweghị awara awara e dere ikike nke Wondershare na-aju na ike-emerụ nwebisiinka, edenyere, nzuzo ma ọ bụ iwu ndị ọzọ nke China.
INDEMNITY: ị na-ekweta chebe, indemnify ma jide wondershare, mmekọ ya na ndị isi ha, nduzi, mmadụ na ndị ọrụ na-adịghị njọ site na imegide bụla na ihe niile na-ekwu, losses, emebi obosara, ụgwọ, na-akwụ ụgwọ na mmefu, gụnyere ọkàiwu 'ụgwọ, ịda site ma ọ bụ metụtara njirimara gị ọdịnaya, ojiji nke Site, ma ọ bụ mebiri nke ọ bụla nke usoro ndị a.
Nzaghachi: ọ bụla na-ekwu ma ọ bụ ihe zigara Wondershare Software, gụnyere-enweghị mmachi nzaghachi, dị ka ajụjụ, na-ekwu, aro ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ihe ọmụma banyere Software, a website ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ngwaahịa, omume ma ọ bụ ọrụ nke Wondershare Software ("Nzaghachi"), ga-e weere na-na-abụghị nzuzo. Wondershare Software ga-ọ dịghị ọrụ nke ụdị ọ bụla na-akwanyere ndị dị otú ahụ Nzaghachi ọ ga-free mụta nwa, ojiji, igosipụta, ngosi, ngosi, ịgbanwe, ike emepụta ọrụ ma kesaa Nzaghachi ka ndị ọzọ na-enweghị mmachi na ga-free iji ihe ọ bụla echiche , echiche, etu esi ma ọ bụ usoro ẹdude ke dị otú ahụ Nzaghachi maka ihe ọ bụla nzube bụla, gụnyere ma na ọnweghị oke na-emepe emepe, n'ichepụta na ahịa ngwaahịa incorporating dị otú ahụ nzaghachi.
REPRODUCTIONS: ọ bụla nyere ikike reproductions nke ọ bụla n'ime ọmụma ẹdude n'ime ebe a ga-agụnye nwebisiinka ọkwa, ụghalaahịa ma ọ bụ ndị ọzọ proprietary akụkọ na-emeghị nke Wondershare Software, na ihe ọ bụla oyiri nke ihe mere site gị. Ikikere nke Software na ojiji nke a website na-achịkwa iwu nke China na iwu nke obodo gị.
Copyright: Copyright na a website (gụnyere-enweghị mmachi, ederede, ndịna-emeputa, logos, ụda na software) na-ekesịpde na ikikere site na Wondershare Software Co., Ltd. All ihe ẹdude na saịtị a na-echebe site Chinese na mba nwebisiinka iwu na ghara -depụtaghachiri, aruputaghari, ekesa,-ebute site ná, na egosiri, bipụtara na-emegharị, ma ọ bụ mesoo n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ site ọlị ma ọ bụ na ihe ọ bụla media enweghị tupu e dere ikike nke Wondershare Software Co., Ltd. Ị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ wepụ ihe ọ bụla ma ọ bụ nwebisiinka ndị ọzọ mara si mbipụta nke ọdịnaya.
Edenyere: Wondershare bụ ụghalaahịa nke Wondershare Software Co., Ltd. na iwu na-echebe site iwu. Ọ pụrụ nanị ga-eji na tupu e dere ikike nke Wondershare Software Co., Ltd. na onye ọ bụla kpọmkwem atụ. Ojiji nke Wondershare edenyere maka azụmahịa nzube enweghị tupu e dere ikike nke Wondershare ga-emekwa edenyere ịda iwu na ikenenke mpi mebiri nke iwu.